Akhriso: Al-Shabaab oo ka jawaabtay warkii DF iyo Mareykanka ee geerida Cali Jabal - Hablaha Media Network
Akhriso: Al-Shabaab oo ka jawaabtay warkii DF iyo Mareykanka ee geerida Cali Jabal
HMN:- Ururka Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u xaqiijiyey inuu geeriyooday hogaamiyihii kooxdaas uga wakiilka ahaa gobolka Banaadir, Cali Maxamed Xuseen oo loo yaqiin Cali Jaba.
Al-Shabaab ayaa bayaan kasoo baxay, oo uu ku saxiixnaa hogaanka sare ee kooxda, kuna qornaa luuqadda carabiga ku xaqiijisay in la dilay Cali Jabal, ama uu shahiiday sida ay ayaga u dhigeen.
Al-Shabaab waxay sheegeyn inay Muslimiinta ugu halbalyeeynayaan geerida ku timaaday hogaamiyahooday Muqdisho Cali Jabal.
Sidoo kale waxay tacsi u direyn umadda Soomaaliyeed iyagoo ka dhawaajiyey inuu Cali Jabal shahiiday, Allana ay uga baryayaan inuu ka aqbalo shahiidnimadiisa.
Bayaankan kasoo baxay hogaanka sare ee Al-Shabaab ayaa lagu yiri: “Waxaan maanta halkaan uga tacsiyeyneynaa Istish-haadka geesi ka mid ah halyeeyada Islaamka ee baalka dahabiga ah ka galay sooyaalka taariikheed dhulka Soomaaliyeed, kana tagay taariikh weyn oo magaciisa wax badan ka xambaarsan”
Haddaba halkaan hoose ka akhriso bayaanka kasoo baxday Al-kataa’ib oo ah garabka warbaahineed ee Shabaab.